Njeti spiritual cloth 265
Njeti spiritual cloth Ngiphonsa iziphonso zami ngosizo lwamandla okhokho bami ngokomoya, ukuphonsa kwami iziphonso kwenziwa ngendlela eyingqayizivele ukusiza izinkinga zakho. Kuyisiphetho sami ukunikela ngeseluleko sami semilingo nesiqondiso esingokomoya sokusebenzela abanye. Njeti spiritual cloth
Ngingakusiza unqobe ubuhlungu benhliziyo yakho futhi ngikufundise ukuthi uzizwe kanjani futhi ukhule kanjani futhi ube nothando. Ake ngikusize ngezinkathazo zakho nezinkinga zakho futhi uqonde ukuthi yini okudingeka uyenze ukufeza ikusasa olifisayo. Ngiyayizwa imicabango nemizwa yabanye. Ngingasebenzisa amandla ami ukubona imizwa kothandekayo wakho. Uma ngenza lokhu uzothola ukucaciseleka ebudlelwaneni bakho. Leli ithuluzi elinamandla okufanele lisetshenziswe ngokunakekelwa ngokweqile. Njeti spiritual cloth
Thuthukisa ngokuphawulekayo isikhalazo sakho “sokunqanda”. Lesi sipelingi singaletha ubuhle bakho bangaphakathi, sivumele abanye ukuthi babone ukukhanga kwakho kobulili, ubuntu bakho obukhangayo, izimfanelo zakho ezinhle. Ngeke nje uzizwe ungcono ngawe, kepha lapho ukubukwa nezincomo kuza kuwe, ukuzethemba kwakho kuzokhula, futhi ungazizwa uphezulu emhlabeni. Futhi kufanele ube ngoba ungumuntu okhetheke kakhulu.Njeti spiritual cloth
Lesi sipelingi singabhebhethekisa izinto futhi sikusize ulungise izinto. Uma uke waba nokuxabana nothile, noma nje ungezwani kahle nabo futhi ungathanda izimo ezinhle ongakha ngazo, lokhu kungaba isipelingi obukade usifuna! Ngemuva kokuphonsa lesi sipelingi into yokuqala abantu abayiqaphelayo “ukuqondana kwezinto” okuningi okusiza ukubhebhethekisa izinto nokudala umoya ofanele wokwenza. Ngezinye izikhathi kuyasiza ukunenza nobabili nizimisele ngokwengeziwe ukulalela nokukhuluma ngezinto futhi nizilungise ngendlela eyakhayo, Njeti spiritual cloth
Previousumutsha love beads
Nextndau spiritual powers